प्रधानमन्त्री ओलीले किन बोलाए पार्टीको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक ?
6th May, 2021 Thu ११:१५:२२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने मिति नजिकिदै गर्दा एमाले अध्यक्ष समते रहेका उनले आज आकस्मिक स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएपनि अझैसम्म शुरु भएको छैन । प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका एक सदस्यले जनाए अनुसार केही बेरमा बैठक शुरु हुने बताइएको छ । विपक्षी गठबन्धनले राजनीति घेरा कसिलो बनाउँदै लगिएको अवस्थामा आकस्मिक बैठक बोलउनुलाई अर्थपूर्णरुपम हेरिएको छ ।
स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार आजको बैठकमा आगामी बैशाख २७ प्रधानमन्त्रीले लिने विस्वासको मत, बैशाख ६ गते हुने वागमतीको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल हुने भएपनि पार्टीभत्र माधव समूहलाई कारवाही गर्ने नगर्ने बारे केही खुलाइएको छैन ।
माधव समूहले विपक्षी गठबन्धनसंग मिलेर राष्ट्रिय सभा उप चुनावमा संघीय विज्ञ डा. खेमलाल देवकोटालाई उमेद्वार बनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली झस्किएका छन् । दुई दिन यता माधब नेपाल विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेतासंग गोप्य भेटघाटमा व्यस्त रहेका छन् । सोही सूचना पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले हिजै कांग्रेस सभापति शेरबाहादुर देउवालाई भेट्न दलबल सहित देउवा निवास पुगेका थिए ।
बैशाख १० गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले माधव समूहका ३० जनालाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । कर्णाली प्रदेशका ४ जनालाई पार्टीबाट निष्काषन गरेको थियो । सोही बैठकले ओली पक्षीय १९ सदस्य स्थायी कमिटी गठन गरेको थियो । माधव समूहका नेताहरुलाई थप कारवाही गर्ने जिम्म स्थायी ममिटीलाई दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । पार्टीभित्रकै माधव समूहले प्रधानमन्त्री ओली फागुन २८ गतेको निर्णयबाट ब्याक नभए सामूहिक राजिनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
Tags नेकपा एमाले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन राजनीति केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा बैठक